हामीलाई सिंगापुर वा क्यानाडा जस्तो अगाडि बढ्न मन छैन । हामी हाम्रो सुनौलो नेपाल चाहन्छौं । जहाँ कुनै हत्या हिंसा, झै झगडा, हुने छैन र मान्छेले मान्छेलाई माया गरेर सुन्दर देश बनाउने हो र हामी सबै मिलेर कसरी हाम्रो देशलाई सुनौलो नेपाल बनाउन सकिन्छ भनेर लाग्नु पर्दछ । हामी सिंगापुर, अमेरिका, बेलायत, जापान र क्यानाडाका कुरा गर्छौं यिनिहरुले के गरेर यो स्थितिमा पुगेका छन सुक्ष्म तरीकाले सोचौ त !
हाम्रो देशमा जति भ्रष्टाचार हुन्छ त्यो नभएको भए अरु कुनै देशलाई हामीले उदारहणको रुपमा हेर्नु पर्ने थिएन । हामी स्वयम् एउटा उदाहरणीय देश बन्न सक्थ्यौ । संसारका हरेक देशले हाम्रो देशको विकास निर्माणमा भएको प्रगतिलाई लिएर उदारहणको रूपमा हेर्ने थिए र भन्ने गर्थे कति छिटो हिड्यो नेपाल विकासको गतिमा ! तर ठीक उल्टो भएको छ देशमा ब्याप्त रूपमा झाङ्गिएको भ्रष्टाचारको कारण आज हामी अरू संसारका देशलाई उदाहरणका रूपमा लिन बाध्य छौ ।
त्यसैले भ्रष्टाचार बन्द गर, देशलाई सिंगापुर, बेलायत बनाउछु भनेर झुटा सपना गरीब जनतालाई नबाड । सक्छौ भने पहिले देश र जनतालाई लुट्न बन्द गर ! गरीब जनताले मिहेनत गरेर कमाएको पैसाबाट तिरेको करले विकास निर्माण गर , देशभित्र शान्ति सु व्यवस्था कायम गर, हरेक जनतको लागि शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था गर , दिनदहाडै चेलीबेटी माथी हुने कुकर्म अत्याचार र बलात्कारी नियन्त्रण गर ।
चोरी गर्न बन्द गर । मान्छे लाई माया गर्न सिक।
अनि मात्र सुनौलो नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ ।
अनि मात्र हामी दुनियाँको लागि ज्वलन्त उदाहरण बन्न सक्छौ
ट्यागहरू: #तिलक पोखरेल#नेपाली बिकास मोडेल